Bilowga burburka Somaliland: Sababta iyo cidda ka masuulka ah! – Radio Daljir
Seteembar 21, 2009 12:00 b 0
Hargeysa, Sept 21 – Waxa in dhoweytaba dalka ka socday khilaaf siyaasiy oo la xidhiidhi muddo kordhin fara badatay iyo doorashooyin dib loo dhigay oo dhici waayay. Waxaa maanta iyo maalmahanba saxaafadda ku qornaa guddi salaadin iyo wax garad is xilqaamay oo dhex dhexadin ka galayay xaaladan siyaasaded ee guracan. Sida caaadada iyo dhaqanku inoo ahayd marka khilaaf siyaasaded yimado ama khilaaf colaaded, waxa somaliland ku caano maashay oo ku badbaaday in madax dhaqameed iyo waxgarad kale is xilqaamaan oo arrinkaa dhex galaan oo dhameeyan. Hase yeeshee aafooyinka iyo nasiib daroyinka waaweyn ee laga dhaxli doono maamulka Dahir Rayale waxa weeyaan iyada oo uu dhaqankii soo jireenka ahaa ee Somaliland uu dhaawac weyn oo aan laga soo kaban karin gaadhsiiyay. Maxaan taas macnaheedu yahay?
Sababta maanta uu dabku uga holcayo Somaliya ee dhanke kalana ay Somaliland u degen tahay ee nabad gelyadda u haysato ma aha in ay reer Somaliland ka caqli iyo dhalasho wanaag sanyihin dadka reer Somallia. Hase yeeshe sababtu waa iyada oo gumaystahii Ingirisku marki u gumaysanayay Somaliand, ay u suurtowday shacabka Somaliland inay ilaashadan oo anay ka lumin dhaqankoodi soo jireenka ahaa ee XEERKA ee geedka hoostisa lagu tashan jiray oo madax dhaqameedka iyo guurtidu khilaafka ku xalin jirtay. Taasi waa ta u suurto gelisay in kun dagaal iyo khilaaf oo soo mara Somaliland si fudud loo xaliyo, iyada oo guurti iyo madax dhaqamed dhex geli jireen. Dhinaca kale, gumsytahi Talyaaniga ahaa ee gumaysan jiray Somaliya ayaa waxa uu ku guulaystay inuu gebi ahaanba burburiyo dhaqankii iyo xeerarkii soo jireenka aha. Taasi waa ta kaliftay in markii colaadahu ka bilowdeen Somaliya, loo taag waayay oo oday, guurti iyo madax dhaqameed midna la dhagaysan waayay ee arrin faraha ka baxday.
Haddaba maamulka Dahir Rayale todobadii sanadood ee uu jiray waxa uu dagaal weyn ka galay sidii uu u burburin lahaa ee u sharaf dili lahaa waxii la odhan jiray GUURTI, MADAX DHAQAMEED ama ODAY. Waynu ogeyn oo Dahir Rayale waxa uu dedaal iyo dagaal dheer u galay inuu qaybiyo oo kala furfuro golahii guurtida isagoo ku shaqaysanaya oo ka fushanaya danahiisa gaarka ah. Maanta odayaasha guurtida ee umadii iyo shacabkii masaakinta ahaa oo arkaya afar jeer si xaqdarro ah intay lacag qaateen muddo kordhin bilaa sharci ah usameeyey Dahir Rayale, oo siyaasadii ku dhex milmay oo kala hiiliyey, berri miyay xeer beegti noqon karaan oo la aamini karaa? Sidoo kakle waa la ogyahay oo Suldaanka ugu faca weyn saldanadaha Somaliland waa Suldaan Maxamed Suldan Cabdiqadir. Waakii sadex bilood ka hor lahaa beeshayadu way aargoosan doontaa oo beelahi la dagaalamay berri hore ayay iska celinaysa oo manta ka aargosanaysa. Wakhtiga ama maalinta uu sidaa lahaa waxa uu u hiilinayay Dahir Rayale oo mucaaridku maagayay, ficilkii iyo dhaqankii Saldanadana wuu ka tagay oo mid siyaasaded ayaa loo adeegsanayay Hadaba suldaankii sidaa lahaa ama guurtidii lacagta qaadanaysay miyay maanta oday iyo dhex u noqon karaan shacabka?
Nasiib darro maanta waxa muuqata in Somaliland marayso halkii uu ka bilowday burburka Somaliya waxii la odhan jiray. Odaygii, Guurtidii iyo Madaxdhaqameedkii ay reer Somaliland ku badbaadeen labaatan sanno ka hor maanta ma jiro oo Dahir Rayale waxuu ku guulaystay inuu burburiyo. Caadi ahaan berrigii hore marka khillaaf jiro ee an maqlo guddi salaadin ayaa soo dhex gashay waan farxi jiray oo waxaan ku kalsoonaa oo sidan naftayda u hubo u hubay in ay wax badbaadin donan, khilafkasna soo afjari doonan. Hase yeeshe, maanta markan arkay baaq ay so saaren guddi salaadin ama maqlayba waxbay dhex galeen, macno badan ma samayso!
Ugu danbeyn, si an u muujiyo, tusaale iyo daliilna ugu noqoto arrinkan aan ka hadlayno. Waxa maanta oo bishu tahay 21.09.09 baaq soo saaray Saladin tidhi waxaanu dhex galayna khilafka siyaasaded ee dalka ka taagan. Dhowr qodob oo ay soo saaren saladintas ayaa waxay ku dalbaden
1-In Wakiiladu ka noqdan xil ka xayubinta Dahir Raayale
2-In Guurtidu ka fogaato wax walbio khilaf kenaya
3-In kulan ay isugu kenayan qolyaha is haya
Haddii aad u fiirsato oo salaadintasi waxay ka dalbaden golaha wakiiladda inay ka noqdaan mooshinki xilka xayubinta Dahir Rayale. Dhinaca kale kama ay dalban golaha guurtida in aanay mooshin muddo kordhin ah u samayn Dahir Rayale inta wada hadalku socdo, balse keliya waxay yidhahdan inay ka fogadan waxi arrinka sii cakiri kara. Miyay talow awoodi kari waayen mase way garan waayeen sidaa ay golaha wakiiladda u yidhahden oo carrabka ugu dhufteen in mooshin xil ka xayuubin ay joojiyan inta wada hadalku socdo, inay golaha guurtidana yidhaahdan in mooshin muddo kordhin aanay samayn inta wada hadalku socdo? Jawaabtu waxa weeye dabcan Saladintani may garan waayin, manay seegin inay intas yidhahden ee way u badheedhen, oo sidii an kor kusoo xusnay, maantana waxa muuqata inay Dahir Rayale u adeegayan oo magac dilkii iyo burburkii qaranka ee Dahir Rayale sii dedejinayan.
Dhan kale haddii aynu ka iftimino, colaadaas maanta ka holcaysa Ceel Bardaale ee lagu guulaysan kari waayay in la xaliyo, sida aan qabo, waxa yadana saldhig u ah burburka iyo waji xumada ku timi waxii GUURTI, ODAY iyo Madax dhaqameed ee Somaliland la odhan jiray, kuwas oo ku dhex milmay siyaasada guracan ee Somaliland. Taasina manta waxay maraysa Dahir Rayale haba iska joogo ama ha tagee, waxu na baday waxa nagaga daran waxuu na baray oo haddii uu ku guulaysto burburinta arrimahas aan kor kusoo sheegay, waa nassiib darro aad u weyn.
Hoggaanka sare ee Al-shabaab oo qiray in xiriir ka dhexeeyo Al-shabaab & Al-Qa’ida, iclaamiyeyna dagaal.
Cali Baashi X. Maxamuud oo aan ka waraysanay safar ay ku yimaadeen Puntland. [Dhegaysi …]